မက်ဂွားယားကို အကြီးအကျယ် ဝေဖန်လိုက်ပြီး သူ့ဆီက ပုံစံကောင်းပြန်ရဖို့ ရက်စက်သင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း - xyznews.co
မက်ဂွားယားကို အကြီးအကျယ် ဝေဖန်လိုက်ပြီး သူ့ဆီက ပုံစံကောင်းပြန်ရဖို့ ရက်စက်သင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင််း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပေါလ်ပါကားက အသင်းဟောင်း အနေနဲ့ လက်ရှိ အသင်းမှ အဓိက ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား ဖြစ်နေတဲ့ ဟယ်ရီ မက်ဂွားယားဆီက အသင်း ခေါင်းဆောင် လက်ပတ်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်း သွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
ဟယ်ရီ မက်ဂွားယား ဆိုတာ 2019 နွေရာသီတုန်းက လက််စတာ စီးတီး အသင်းမှ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင််းဆီ ခံစစ် ကစားသမား တစ်ဦး အတွက် ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး တစ်ရပ် ဖြစ်တဲ့ ပေါင် သန်း 80 နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိလာခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီတုန်းကတော့ သူဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ချက်ချင်း အံဝင်ခဲ့ပြီး ယိုယွင်းနေခဲ့တဲ့ ခံစစ်ကြောင်းကို လမ်းကြောင်း အမှန်ပေါ် ပြန်လည် ရောက်ရှိအောင် အမြန်ဆုံး ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာထူးကို မကြာမီမှာပဲ လက်ခံ ရယူသွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာတော့ မက်ဂွားယားရဲ့ စွမ််းဆောင်ရည်တွေဟာ ကျဆင်းနေခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကြောင်းမှာ အမှားတွေကို မကြာခန ကျူးလွန်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီရာသီမှာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင်ဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ဝေဖန်မှုတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူဟာ ယူနိုက်တက်တို့ မန်စီးတီး အသင်းကို0–2ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဥ်မှာလည်း ဒုတိယမြောက် ပေးဂိုးကို ဟန့်တားနိုင်ခွင့် ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ အသင်းဖော် လုခ်ရှော နည််းတူ လေးတိလေးကန် ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အတွက် လက်ဆောင််ဂိုး ပေးဆောင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုတော့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း ပေါလ် ပါကားက မက်ဂွားယားဆီက အသင်းခေါင်းဆောင် လက်ပတ််ကို ဖြုတ်ယူလိုက်ဖို့ ၊ သူ့ကို ခံစစ်ပိုင်း တာဝန်တွေပဲ သီးသန့်ပေးပြီး ကစားပုံအပေါ်သာ အာရုံစိုက်စေဖို့ ဆိုးလ်ရှားကို အကြံပေး တိုက်တွန်း နှိုးဆော် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” အိုလီ အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချမှတ်ရပါ့မယ် ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို သိသာစေနိုင်မယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုဖြစ်မှာပါ ။ သူ့ (မက်ဂွားယား) ဆီက အသင်းခေါင်းဆောင် လက်ပတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ခံစစ်မှူး တစ်ဦးသာ ပထမဆုံး ဖြစ်နိုင်ဖို့ လုပ်ခိုင်းရပါ့မယ် ။ အခု သူ့ပုံစံက စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်နေပါပြီ ”
” ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ရွိုင်ကိန်းဟာ သူ့အကြောင်း ပြောဆိိုခဲ့သေးပြီး ပရိသတ် တစ်ဦးကလည်း သူ့ကို ကွင်းထဲက ထွက်သွားဖို့ အော်ဟစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါက အခုခေတ်မှာ ဖြစ်နေကျ အရာတစ်ခုပါ ။ သူတို့တွေကို လိုက်ကြည့် မနေပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်တို့ လူတွေကို ဝမ်းမနည်းစေချင်ကြပါဘူး ”
” အခုတော့ ဒါကို လုပ်သင့်ပါပြီ ။ မက်ဂွားယား အပေါ် လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ ။ သူတို့တွေ ဒီဂျာစီကို ဘယ်လောက်တောင် ဝတ်ဆင်လိုကြသလဲ ? ဘယ်လောက်တောင် ဘောလုံး ကစားချင်ကြသလဲ ? မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် ဘယ်လောက်် ကစားပေးလိုကြသလဲ ? ”
” ကျွန်တော် မက်ဂွားယားကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူက အသာယာ ရပ်နေပြီး လူကျွံဘော ဖမ်းကစားနိုင်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ လူတိုင်းကို ကစားခိုင်းစေလိုခဲ့ပြီး အကူအညီတွေ လိုချင်နေခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ အခြားသူတွေကိုပဲ လိုက်လံ အပြစ်တင်ချင် နေခဲ့သလိုပါပဲ ”
” သူ့ကြောင့် ခံစစ် အစွန်လူတွေလည်း စပါးနဲ့ ပွဲတုန်းက ကစားခဲ့ကြသလို တိုက်စစ် စိတ်ကြိုက် မတက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး ။ ဒီပွဲမှာ ခံစစ်5ယောက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် က တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန် ပြနေခဲ့ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသင်းခေါင်းဆောင်က စကားမပြော ၊ တာဝန်ယူလိုစိတ်မရှိ ဖြစ်နေခဲ့တယ်လေ ” လို့ ပေါလ် ပါကား က ဝေဖန်ခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ယုံကြည်ချက်တွေ အပြည့်ပါဝင်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ နည်းပြသစ် ဇာဗီ ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားများ
Next Article ခေါ်ယူချင်တဲ့ အသင်း 13 သင်းထိ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ